Sketch , Adobe XD,UXPin or InVision Studioဘယျ Tools အ ကောငျးဆုံး လဲ? - Myanmar Tech Reviews
အ ရငျ တုံး က Design Software ဆို ရငျ Adobe Software ကို သတိရကွ မှာ ပါ .Standard အသဈ တခုဖွဈ တဲ့ Sketch ဟာ လဲ နာမညျ ကွီး တဲ့ UI Design Tools တခု ပါ ပဲ။ UI Designers တှေ Design ဖနျ တီး ရာ မှာ တော့ လို အပျ ခကျြ အရ Design Tools အမြိုး မြိုး သုံးကွ ပါ တယျ။ ဒါပေ မဲ့ Design Tool တှေ မှာ ကှဲ ပွား ခကျြ အနညျး ငယျ ရှိ ပါ တယျ။ Design Tools. တှေ မှာ ဘယျ Tools က အကောငျး ဆုံး လဲ compare လုပျကွညျ့ ရ အောငျ Sketch , Figma, Adobe XD, UXPin နဲ့ In Vision Studio. အခု Tools တှေ က Free သုံး လို့ အဆငျပွပေါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အကနျ့ သတျ နဲ့ ပေး ထား တာ ပါ။အလုပျ ထဲ မှာ ဆို ရငျ တော့ ဝယျ သုံး တာ အ ကောငျး ဆုံး ပါပဲ။ Tools တှေ ကို compare လုပျ လိုကျ ရငျ ဘယျ Tools တှကေ အသုံး ဝငျ ဆုံး လဲ ။ Sketch, Sigma, Adobe XD, UXPin and InVision Studion တှေ အဓိ က basically ပါ ဝငျ တာ က တော့
Static user interface Screen Designs
Responsive Layouts တှေ ပါဝငျပါမယျ။
3. Page တှေ Layer တှေ ပါဝငျပါမယျ။
4. Nested Components တှေ ပါဝငျပါမယျ။
5. Designer က Layer တှကေို အဆငျ့ ဆငျ့ ထညျ့ တာ ပါဝငျပါမယျ။
Studioကို မွငျ တာ နဲ့ စိတျ လှုပျ ရှား မှု ကDesign ဆှဲ ခငျြ မှု ကို တှနျးအားဖွဈ စေ ပါတယျ ။ ဒါပေ မဲ့ limited တော့ ရှိ ပါ တယျ။
အခု လကျ ရှိ သုံးနေ တာတော့ limited တှေ ရှိနေ ပါသေး တယျ ။Layers တှေ ကို limited နဲ့လုပျ ရ ပါ တယျ ။ Dashed borders လဲ မပါ ပါဘူး ။ Text Layers တှေ ကို shadows နဲ့ blurs တို့ လုပျ လို့ မရပါ ဘူး ။ Text Layer တှေ ကို လဲ Heightပေးလို့ မရ ပါ ဘူး ။ Vertical Text alignment လဲ လုပျ လို့ မရပါ ဘူး ။ Components တှကေိုမွငျ သာအောငျ မထား ထား ပါဘူး ။ အဲ့ဒါ က Alphabetical list ထား ခငျြ ရငျ မ တှေ့ တာဖွဈ တကျ ပါ တယျ။ Objects တှကေို Groups နဲ့ထား ခငျြ ရငျ position ခပြေးလို့ မရ ပါ ဘူး
Zooming and panningလုပျ ရငျ Performance ကလေး သှား ပါ တယျ။
InVision Studio မှာကောငျး ကှကျလေး တော့ ပါ ပါ တယျ။ Layers တှေ ရဲ့ Size ကို ပွောငျး နိုငျပွီး position တှကေို စိတျကွိုကျ ထား နိုငျ ပါ တယျ။Design တှကေို Time Dimension နဲ့ control လုပျ နိုငျ ပါ တယျ။ အဲ့ ဒါ က တ ခွား tools တှေ ထ ကျ ပိုကောငျး ပါ တယျ။
UXPin ကDesign process တခု လုံး ရဲ့ project management features တှပေါ ဝငျ ပါ တယျ ။ Screen prototypes ပါ ထုတျ လို့ ရ ပါ တယျ။ အခွား tool မြား ထကျ သာ လှနျပါ တယျ ။ UXPin နဲ့ project တခု ဆ မယျ ဆို ရငျ သူ့ မှာ Libraries တှေ က အဆငျ သငျ့ ပါ ပဲ။ Web Desing , IOS and Material Design တှေ အရနျ သငျ့ ပါ ပဲ ။ UXPin မှာ ပါ ဝငျ တဲ့ Toolsတှေ မှာ Zooming ကို Mouse cursor နဲ့ လို တဲ့ position သုံး လို့ မရ ပါ ဘူး ။ ဖိ ပွီး အကွိမျ ကွိမျ zooming နဲ့ scroolling ကို လုပျလို့ ရ ပါ တယျ။ အသုံး ပွု သူ ကို ရှုပျထှေးစေ တာ က တော့ Components ရဲ့ Linked တှေ ပါ ။ Component တှကေို ကို ယျတိုငျ ထကျ ထညျ့ နိုငျ ပါ တယျ ။ ရှိပွီး သား တှကေို လဲ ဖကျြ နိုငျ ပါ တယျ။ UI screen နဲ့ page မြား ကို တနေ ရာ တညျး မှာ စုပွီး မမွငျ နိုငျ ပါ ဘူး ။
Custom Css element တှေ ကို ထညျ့ နိုငျ ပါ တယျ ။ properties တှတေော့ limit ရှိ ပါ တယျ ။ Animation ထညျ့လို့ မရပါ ဘူး ။ Components တှေ တော့ နရော ခြ နိုငျ ပါ တယျ ။Html prototypes တှေ ကို real text fields လုပျ လို့ ရပါ တယျ။
Keyframe animation ထညျ့ နိုငျ ပါ တယျ။ Trail သုံး တာ က တော့7ရကျ သုံးကွညျ့ လို့ ရ ပါ တယျ ။ ကနျြ တျော က တော့ မ ကွိုကျ ပါ ဘူး ။ စာ ဖတျသူ က ရော ?
ထူးခွား တာ က Adobe က CS5 versionနောကျ ပိုငျး ကို developing fireworks တှေ ထကျ မထှကျ လာ တော့ ပါ ဘူး ။သေ ခြာ တာ က တော့ UI designers တှေ ကို ပဲ Adobe XDကို ထုတျပေးလိုကျ ပါ တယျ ။ Creative Cloud tools နဲ့ ပို သုံး ရ တာ အဆငျပွေ လာ ပါ တယျ ။ scrolling နဲ့ zooming ကတော့ မွနျ ပါ တယျ ။ ထဈ မသှား ပါဘူး Smooth တျော တျောလေးဖွဈ ပါ တယျ ။ Bunchတှေ ကို copy ကူး ရာ မှာ Unmaintainable ရှုပျထှေးစေ ပါ တယျ။
ထပျခါထပျခါအစိတျအပိုငျးတဈခုကျောပီကူး ရာ မှာ အခြိနျကွာမွငျ့ နညျး နညျးကွာ ပါ တယျ ။ Adobe XD မှာ “repeat grid ” လုပျ ရာ မှာ မွနျ ပါ တယျ ။ Layout တှေ ကို Copy ကူး ပွီး အား လုံး ကို instances လုပျ ခြိနျ မွနျ ဆနျ ပါ တယျ ။
Adobe XD က
MAC နဲ့ windows တှေ မှာ အသုံး ပွု နိုငျ ပါ တယျ ။
Prototyping တှေ ကို transition နဲ့ overlays တှေ ထားလို့ ရ ပါ တယျ ။
Design changes ခငျြ ပါ က realtime မွငျ နိုငျ ပါ တယျ ။
Prototypeတှေ ကို Video recording လုပျ နိုငျ ပါ တယျ ။
Link အဖွဈ ထား နှိငျ ပါ တယျ Photoshop files နဲ့ Texts file တှေ ကို ။
Serious ဖွဈ တဲ့ Limitations တှေ ရှိ ပါ တယျ။
Components တှေ ကို resized မလုပျ နိုငျ ပါ ဘူး ။
Sketch မှာ အကွီး မှား ဆုံးသော user တှေ အတှကျဖွဈ ပါ တယျ နောကျ ဆုံး API တှသေုံး တဲ့ Third party applicationတှေ ကို တောငျ Sketch file ထဲ မှာ create လုပျ နှိငျ ပါ တယျ ။ Sketch နဲ့ တှဲ သုံးလို့ ကောငျး တဲ့ Framer နဲ့ principleတို့ဖွဈ ပါတယျ ။ Plugins , extensions နဲ့ libraries တှေ အမြား အပွား ရ နိုငျ ပါ တယျ။ အား နညျး ခကျြ က တော့ version update လုပျ လိုကျ ရငျ stack တှေ မမွငျ နိုငျ တော့ ပါ ဘူး ။ Sketch ကို အကောငျး ဆုံးလို့ မွငျ မိ တာ က တော့
Ecosystem: Plugin တှေ မြား ပါ တယျ ။
Templates, symbols နဲ့ Realtimeboard တို့ ပါ ဝငျ ပါ တယျ။
Version control လဲလုပျလို့ ရပါ တယျ။
Performance ပိုငျး မှာ လဲ responsiveဖွဈ ပါ တယျ ။
Sketch ရဲ့ အဓိ ကစိတျ ပကျြ စရာ က တော့ third party tools တှေ Limitedဖွဈ ပါ တယျ ။ Mac အတှကျ ပဲ သုံး နှိငျ ပါ တယျ။
Screen Design Tools တှေ အမြား အပွား ရှိ ပါ တယျ။ မိ မိ တို့ ကိုယျ ပိုငျ အား သာသော Tools သာ အ ကောငျး ဆုံး ပါ ပဲ။ Perfect ဖွဈ ဆုံး Tools တော့ မတှသေ့ေး ပါ ဘူး ။
Thank you, everyone who pointed out mistakes and omissions.
အ ရင် တုံး က Design Software ဆို ရင် Adobe Software ကို သတိရကြ မှာ ပါ .Standard အသစ် တခုဖြစ် တဲ့ Sketch ဟာ လဲ နာမည် ကြီး တဲ့ UI Design Tools တခု ပါ ပဲ။ UI Designers တွေ Design ဖန် တီး ရာ မှာ တော့ လို အပ် ချက် အရ Design Tools အမျိုး မျိုး သုံးကြ ပါ တယ်။ ဒါပေ မဲ့ Design Tool တွေ မှာ ကွဲ ပြား ချက် အနည်း ငယ် ရှိ ပါ တယ်။ Design Tools. တွေ မှာ ဘယ် Tools က အကောင်း ဆုံး လဲ compare လုပ်ကြည့် ရ အောင် Sketch , Figma, Adobe XD, UXPin နဲ့ In Vision Studio. အခု Tools တွေ က Free သုံး လို့ အဆင်ပြေပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အကန့် သတ် နဲ့ ပေး ထား တာ ပါ။အလုပ် ထဲ မှာ ဆို ရင် တော့ ဝယ် သုံး တာ အ ကောင်း ဆုံး ပါပဲ။ Tools တွေ ကို compare လုပ် လိုက် ရင် ဘယ် Tools တွေက အသုံး ဝင် ဆုံး လဲ ။ Sketch, Sigma, Adobe XD, UXPin and InVision Studion တွေ အဓိ က basically ပါ ဝင် တာ က တော့
Responsive Layouts တွေ ပါဝင်ပါမယ်။
3. Page တွေ Layer တွေ ပါဝင်ပါမယ်။
4. Nested Components တွေ ပါဝင်ပါမယ်။
5. Designer က Layer တွေကို အဆင့် ဆင့် ထည့် တာ ပါဝင်ပါမယ်။
Studioကို မြင် တာ နဲ့ စိတ် လှုပ် ရှား မှု ကDesign ဆွဲ ချင် မှု ကို တွန်းအားဖြစ် စေ ပါတယ် ။ ဒါပေ မဲ့ limited တော့ ရှိ ပါ တယ်။
အခု လက် ရှိ သုံးနေ တာတော့ limited တွေ ရှိနေ ပါသေး တယ် ။Layers တွေ ကို limited နဲ့လုပ် ရ ပါ တယ် ။ Dashed borders လဲ မပါ ပါဘူး ။ Text Layers တွေ ကို shadows နဲ့ blurs တို့ လုပ် လို့ မရပါ ဘူး ။ Text Layer တွေ ကို လဲ Heightပေးလို့ မရ ပါ ဘူး ။ Vertical Text alignment လဲ လုပ် လို့ မရပါ ဘူး ။ Components တွေကိုမြင် သာအောင် မထား ထား ပါဘူး ။ အဲ့ဒါ က Alphabetical list ထား ချင် ရင် မ တွေ့ တာဖြစ် တက် ပါ တယ်။ Objects တွေကို Groups နဲ့ထား ချင် ရင် position ချပေးလို့ မရ ပါ ဘူး
Zooming and panningလုပ် ရင် Performance ကလေး သွား ပါ တယ်။
InVision Studio မှာကောင်း ကွက်လေး တော့ ပါ ပါ တယ်။ Layers တွေ ရဲ့ Size ကို ပြောင်း နိုင်ပြီး position တွေကို စိတ်ကြိုက် ထား နိုင် ပါ တယ်။Design တွေကို Time Dimension နဲ့ control လုပ် နိုင် ပါ တယ်။ အဲ့ ဒါ က တ ခြား tools တွေ ထ က် ပိုကောင်း ပါ တယ်။
UXPin ကDesign process တခု လုံး ရဲ့ project management features တွေပါ ဝင် ပါ တယ် ။ Screen prototypes ပါ ထုတ် လို့ ရ ပါ တယ်။ အခြား tool များ ထက် သာ လွန်ပါ တယ် ။ UXPin နဲ့ project တခု ဆ မယ် ဆို ရင် သူ့ မှာ Libraries တွေ က အဆင် သင့် ပါ ပဲ။ Web Desing , IOS and Material Design တွေ အရန် သင့် ပါ ပဲ ။ UXPin မှာ ပါ ဝင် တဲ့ Toolsတွေ မှာ Zooming ကို Mouse cursor နဲ့ လို တဲ့ position သုံး လို့ မရ ပါ ဘူး ။ ဖိ ပြီး အကြိမ် ကြိမ် zooming နဲ့ scroolling ကို လုပ်လို့ ရ ပါ တယ်။ အသုံး ပြု သူ ကို ရှုပ်ထွေးစေ တာ က တော့ Components ရဲ့ Linked တွေ ပါ ။ Component တွေကို ကို ယ်တိုင် ထက် ထည့် နိုင် ပါ တယ် ။ ရှိပြီး သား တွေကို လဲ ဖျက် နိုင် ပါ တယ်။ UI screen နဲ့ page များ ကို တနေ ရာ တည်း မှာ စုပြီး မမြင် နိုင် ပါ ဘူး ။
Custom Css element တွေ ကို ထည့် နိုင် ပါ တယ် ။ properties တွေတော့ limit ရှိ ပါ တယ် ။ Animation ထည့်လို့ မရပါ ဘူး ။ Components တွေ တော့ နေရာ ချ နိုင် ပါ တယ် ။Html prototypes တွေ ကို real text fields လုပ် လို့ ရပါ တယ်။
Keyframe animation ထည့် နိုင် ပါ တယ်။ Trail သုံး တာ က တော့7ရက် သုံးကြည့် လို့ ရ ပါ တယ် ။ ကျန် တော် က တော့ မ ကြိုက် ပါ ဘူး ။ စာ ဖတ်သူ က ရော ?
ထူးခြား တာ က Adobe က CS5 versionနောက် ပိုင်း ကို developing fireworks တွေ ထက် မထွက် လာ တော့ ပါ ဘူး ။သေ ချာ တာ က တော့ UI designers တွေ ကို ပဲ Adobe XDကို ထုတ်ပေးလိုက် ပါ တယ် ။ Creative Cloud tools နဲ့ ပို သုံး ရ တာ အဆင်ပြေ လာ ပါ တယ် ။ scrolling နဲ့ zooming ကတော့ မြန် ပါ တယ် ။ ထစ် မသွား ပါဘူး Smooth တော် တော်လေးဖြစ် ပါ တယ် ။ Bunchတွေ ကို copy ကူး ရာ မှာ Unmaintainable ရှုပ်ထွေးစေ ပါ တယ်။
ထပ်ခါထပ်ခါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကော်ပီကူး ရာ မှာ အချိန်ကြာမြင့် နည်း နည်းကြာ ပါ တယ် ။ Adobe XD မှာ “repeat grid “ လုပ် ရာ မှာ မြန် ပါ တယ် ။ Layout တွေ ကို Copy ကူး ပြီး အား လုံး ကို instances လုပ် ချိန် မြန် ဆန် ပါ တယ် ။
MAC နဲ့ windows တွေ မှာ အသုံး ပြု နိုင် ပါ တယ် ။
Prototyping တွေ ကို transition နဲ့ overlays တွေ ထားလို့ ရ ပါ တယ် ။
Design changes ချင် ပါ က realtime မြင် နိုင် ပါ တယ် ။
Prototypeတွေ ကို Video recording လုပ် နိုင် ပါ တယ် ။
Link အဖြစ် ထား နှိင် ပါ တယ် Photoshop files နဲ့ Texts file တွေ ကို ။
Serious ဖြစ် တဲ့ Limitations တွေ ရှိ ပါ တယ်။
Components တွေ ကို resized မလုပ် နိုင် ပါ ဘူး ။
Sketch မှာ အကြီး မှား ဆုံးသော user တွေ အတွက်ဖြစ် ပါ တယ် နောက် ဆုံး API တွေသုံး တဲ့ Third party applicationတွေ ကို တောင် Sketch file ထဲ မှာ create လုပ် နှိင် ပါ တယ် ။ Sketch နဲ့ တွဲ သုံးလို့ ကောင်း တဲ့ Framer နဲ့ principleတို့ဖြစ် ပါတယ် ။ Plugins , extensions နဲ့ libraries တွေ အများ အပြား ရ နိုင် ပါ တယ်။ အား နည်း ချက် က တော့ version update လုပ် လိုက် ရင် stack တွေ မမြင် နိုင် တော့ ပါ ဘူး ။ Sketch ကို အကောင်း ဆုံးလို့ မြင် မိ တာ က တော့
Ecosystem: Plugin တွေ များ ပါ တယ် ။
Templates, symbols နဲ့ Realtimeboard တို့ ပါ ဝင် ပါ တယ်။
Version control လဲလုပ်လို့ ရပါ တယ်။
Performance ပိုင်း မှာ လဲ responsiveဖြစ် ပါ တယ် ။
Sketch ရဲ့ အဓိ ကစိတ် ပျက် စရာ က တော့ third party tools တွေ Limitedဖြစ် ပါ တယ် ။ Mac အတွက် ပဲ သုံး နှိင် ပါ တယ်။
Screen Design Tools တွေ အများ အပြား ရှိ ပါ တယ်။ မိ မိ တို့ ကိုယ် ပိုင် အား သာသော Tools သာ အ ကောင်း ဆုံး ပါ ပဲ။ Perfect ဖြစ် ဆုံး Tools တော့ မတွေ့သေး ပါ ဘူး ။
အသဈတှရှေိ့လိုကျတဲ့ Android OS ရဲ့ ဟာကှကျတဈခုကနေ သငျ့ကို စောငျ့ကွညျ့နနေိုငျပွီလား
Microsoft က တကယ်ပဲ Open Source အားလုံးကိုမူပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီလား ?